Puntland oo ka digtay in lacagta kaashka ah ee Dowlada Federaalka siisay Somaliland loo adeegsado colaada Sool iyo Sanaag - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandPuntland oo ka digtay in lacagta kaashka ah ee Dowlada Federaalka siisay Somaliland loo adeegsado colaada Sool iyo Sanaag
June 5, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia, Somaliland 0
Guddiga Difaaca Puntland. [Sawirka]
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa cambaareysay lacagta kaashka ee Dowladda Federaalka Soomaaliya ay ugu deeqday Somaliland.
Guddiga difaaca Puntland oo shir saxaafadeed maanta oo Talaado ah ku qabtay Garoowe, ayaa sheegay in lacagtaas kaashka ah ay maamulka Somaliland u adeegsan doonto colaada gobolka Sool iyo Sanaag.
Guddiga difaaca Puntland ayaa sheegay in aysan diidanayn in loo gurmado dadka kunool Somaliland ee ay dhibbaatadu soo gaartay, balse ay ahayd in lacagtaas la mariyo haayadaha kheyriga halka gacanta laga saari lahaa maamulka Somaliland.
“Puntland waxay u aragtaa in lacagtaasi tahay mid kaash ah oo gacanta laga saaray Muuse Biixi iyo maamulkiisa laguna hurinayo dhibbaatada ka taagan Sool iyo Sanaag, annaga ka Puntland ahaan waan cambaareynaynaa, waxaana u aragnaa mid lagu dhibbaateynayo Puntland iyo shacbkeeda,” ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Gudaha Puntland Cabdulaahi Cali Xirsi, oo kamid ah guddiga difaaca Puntland.
Puntland ayaa sheegtay in ay u aragto in Dowladda Federaalka ay ku biirtay colaada ka dhaxeysa Puntland iyo Somaliland, ayna garabsiineyso Somaliland.
Masuuliyiin katirsan Dowladda Federaalka oo ay hoggaaminayeen Raysulwasaare Ku Xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed iyo Wasiirka Maaliyada Cabdiraxmaan Ducaale Beyle ayaa shalay oo Isniin ahayd sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay $1 milyan ugu deeqday Somaliland si loogu caawiyo dadkii ay dhibbaatadu kasoo gaartay roobabkii debaylaha watay oo dhawaan ku dhuftay degaanada bari ee Somaliland.
January 9, 2018 Puntland oo joojisay baabuurta rakaabka ee ka dhex shaqeeya Puntland iyo Somailand
January 21, 2018 Afhayeenka Ciidamada Daraawiishta Puntland oo sheegay in ciidankoodu uu gaari doono xadka ugu dambeeya ee ay la wadaagaan Somaliland
Labo xildhibaan oo katirsan Hir-Shabelle oo lagu dilay weerar gaadmo ah oo ka dhacay meel u dhow Muqdisho